Ragusa 2 olwandle - I-Airbnb
Ragusa 2 olwandle
Ikhaya leholide elisendaweni emaphakathi ye-Marina di Ragusa e-Via Cagliari, 56, esanda kulungiswa, ilungele iholide lakho ngokunethezeka okukhulu.
Indlu ingahlalisa abantu abangafika kwabangu-4 futhi ukwengezwa kombhede kuyatholakala futhi 5.
Ifakwe ikhishi eligcwele, umbhede usofa, umbhede ophindwe kabili, amathawula, amashidi, ibhavu lokugeza, igumbi lokugezela elizimele, umshini wokuwasha, uvulandi onetafula, i-WI-FI, itafula nezihlalo, okomoya, izipikha ezilalelwayo zeBluetooth, ngaphezu kwalokho kukhona. a...
Omunye wabathengisi bethu abahamba phambili e-Marina di Ragusa! Itholakala e-Marina di Ragusa, i-Ragusa 2 al mare inikeza ithala, ikhishi kanye ne-WiFi yamahhala.Iyunithi ngayinye ifakwe ngokugcwele umshini wokuwasha, i-TV yesikrini esiyisicaba, usofa nedeski. Onke amayunithi aneziphephetha-moya futhi anendawo yokuhlala kanye/noma yokudlela, kanye nekhishi elinehhavini, isiqandisi nesitofu.Ikhaya leholide liqhele ngamakhilomitha angama-24 ukusuka eRagusa kanye namakhilomitha angama-25 ukusuka eModica. I-Comiso Airport iqhele ngamakhilomitha angama-29.
umbhede oyidabulu engu- 1, Umbhede olala umuntu oyedwa o-1, 1 umbhede wosofa, 1 usofa
Indlu itholakala ngamamitha angu-200 ukusuka esigcawini esikhulu kanye nolwandle
Ngihlala ngitholakala ukuze ngiphendule izivakashi ngocingo noma ngombhalo